ပိုမိုမြန်ဆန်စွာ blogging အတွက်သင်ခန်းစာငါးခုနှင့်လျှို့ဝှက်ချက်တစ်ခု | Martech Zone
တနင်္လာနေ့, သြဂုတ်လ 24, 2009 တနင်္ဂနွေ, အောက်တိုဘာလ 4, 2015 ရောဘတ်ကွပ်မျက်
19 ရာစု handbill
အောင်မြင်သောစျေးကွက်ရှာဖွေရေးလှုပ်ရှားမှုများသည်မတူညီသောနည်းလမ်းများဖြင့်ပျံ့နှံ့နိုင်သည်၊ မတူညီသောမက်ဆေ့ခ်ျများပါ ၀ င်နိုင်သည်သို့မဟုတ်လူအမျိုးမျိုးကို ဦး တည်နိုင်သည်။ အစာရှောင်ခြင်းဖြစ်ရမည်။ ယှဉ်ပြိုင်ရန်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းမှာစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးကိုလျင်မြန်စွာတည်ဆောက်ရန်နှင့်ကုန်ပစ္စည်းများကိုဖောက်သည်များထိထိရောက်ရောက်ထုတ်ယူရန်ဖြစ်သည်။ အလွန်အကျွံယူပြီးသင်၏စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကြိုးပမ်းမှုများသည်လုံးဝစွန့်ပစ်ပစ္စည်းဖြစ်သည်။
ဘလော့ဂ်အကြောင်းအရာကိုထုတ်လုပ်သည့်အခါပြတင်းပေါက်သည် ပို၍ ပင်တင်းကျပ်သည်။ အင်တာနက်ဖြစ်စဉ်တစ်ခုလုံးသည်ပြီးပြည့်စုံစွာလည်ပတ်နေနိုင်သည် နာရီအနည်းငယ်။ အကယ်. Douglas Karr ချက်ချင်းပေါ်ပေါ်ခုန်တက်ဘူး Brody PR စနစ် fiascoဤနေရာတွင်ဆွေးနွေးမည့်အကြောင်းအရာသည်များများစားစားမဟုတ်ပါ Martech Zone။ ကိုယ်ကျင့်တရား - ထိရောက်သောဘလော့ဂါသည်တုန့်ပြန်မှုနှင့်အကျိုးဖြစ်ထွန်းမှုရှိရမည်။
blogINDIANA 2009 မှာကျွန်တော်အစည်းအဝေးတခုလုပ်ခဲ့တယ် ကုန်ထုတ်စွမ်းအားနှင့် Blogging ။ ဆွေးနွေးချက်သည်ဘလော့ဂါတိုင်းသင်ယူရမည့်အရေးကြီးသည့်သင်ခန်းစာငါးခုနှင့်စတင်သည်။
လူတိုင်းနီးပါးသည် blogging မှထွက်သွားကြသည်။ ယင်းအလိုအရ New York Times ကို မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်သောဘလော့ဂ်များအားလုံး၏ ၉၅% ကိုစွန့်ပစ်လိုက်သည်။ ၎င်းသည်ကုန်ထုတ်စွမ်းအားညံ့ဖျင်းခြင်းကြောင့်ဘလော့ဂ်လုပ်ခြင်းကိုသေစေနိုင်သည့်အထောက်အထားဖြစ်သည်။
အံ့သြစရာကောင်းတဲ့ဘလော့ဂ်တွေဟာပုံမှန်ပါပဲ။ ကြီးကျယ်ခမ်းနားသောလူကြိုက်များသည်ဖြစ်စေ၊ နယ်ပယ်တစ်ခုတွင်အောင်မြင်သည်ဖြစ်စေကြီးမားသောဘလော့ဂ်များအားလုံးသည် တသမတ်တည်း update လုပ်.
အရည်အသွေးကသိပ်အရေးမကြီးဘူး။ ဘလော့ဂါများ အမြဲတမ်းငြင်းခုံ သဒ္ဒါနှင့်စာလုံးပေါင်းသည်အရေးမကြီး၊ စီးပွားရေးဘလော့ဂ်များကနံနေသလားဟုမကြာခဏထောက်ပြသည်။
လတ်တလော post ကိုအနိုင်ရရှိ။ ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များနှင့်သုံးစွဲသူများသည်မနေ့ကရေးသားခဲ့သည့်အရာများထက်သင်ယနေ့ရေးသားခဲ့သည့်အရာများကိုပိုမိုအာရုံစိုက်ကြသည်။
ငါတို့ရှိသမျှသည်အချည်းနှီးဖြစ်ကြ၏။ ဘလော့ပို့စ်တိုင်းကိုရေးသားပြီးလူသိရှင်ကြားထုတ်ဝေသည် ဒါကြောင့်တခြားသူတွေကဖတ်နိုင်တယ်။ ဘလော့ဂ်ရေးရာတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏စကားလုံးများကိုဖတ်စေချင်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့ရေးသည်ကိုအသိအမှတ်ပြုသည်။
ဤရွေ့ကားသဘောပေါက်အချို့သိသာပေမယ့်မရှိမဖြစ်နိဂုံးချုပ်ဖို့ ဦး ဆောင်လမ်းပြ။ အကယ်၍ လူတိုင်းနီးပါးသည် blogging မှထွက်သွားပါက၊ အကယ်၍ ကြီးကျယ်သောဘလော့ဂါများသည်တသမတ်တည်းသောအချိန်ဇယားတွင်ထုတ်ဝေပါက၊ သင်သည်သူတို့၏ရာထူးများနှင့်အတူတူပင်လုပ်ခြင်းထက်ပိုမိုပါ ၀ င်နိုင်သည်။ သို့သော်၊ ပိုမိုမြန်ဆန်သော blogging အတွက်ကြီးမားသောလျှို့ဝှက်ချက်တစ်ခုရှိသည်။ ဘလော့ဂ်များရေးသားခြင်းအတွက်လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုကိုဒီဇိုင်းဆွဲပါ.
မည်သည့်ဘလော့ဂါသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီနှစ်ခုမျှ blogging အတွက်တူညီသောလုပ်ငန်းစဉ်ရှိလိမ့်မည်နည်း၊ သို့သော်စဉ်းစားထိုက်သောအစိတ်အပိုင်းများစွာရှိပါသည်။
ရေးသားထားသောစာမူများ - Slaughter Development တွင်ပို့စ်အမျိုးအစား ၅ ခုအတိအကျရှိသည် တုံ့ပြန်ချက် အခြားဘလော့ဂ်၊ သတင်းဆောင်းပါးသို့မဟုတ် op-ed အကြောင်းအရာများ၊ က အကျဉ်းချုပ် ကျွန်ုပ်တို့သည်စပွန်ဆာသို့မဟုတ်တက်ရောက်ခဲ့သည့်အဖြစ်အပျက်တစ်ခု၊ အဆက် ယခင်ဘလော့ဂ်ပို့စ်၏ထူးခြားတဲ့ ရှုထောင့် ဘုံအသိပညာတစ်ခုသို့မဟုတ်နေ့စဉ်စကားရပ်, ဒါမှမဟုတ်တစ် ဦး အပေါ် ကြေညာချက် လာမည့်ဖြစ်ရပ်သို့မဟုတ်အဆိုပြုထားအရေးယူ၏။ ဘလော့ရေးခြင်းဆိုသည်မှာဤအမျိုးအစားငါးခုအနက်မှတစ်ခုကိုရွေးချယ်ခြင်းဖြစ်သည်၊ ၎င်းသည်ဘလော့ဂ်ဂါအားအဘယ်အကြောင်းရေးသားရမည်ကိုမသိသောသွက်ချာပါဒမှကင်းဝေးစေသည်။ ဒါ့အပြင်သင်ဟာသင့်ကိုယ်သင်ထပ်ခါတလဲလဲထပ်ခါတလဲလဲမဖြစ်စေရန်အမျိုးအစားများကိုလှည့်နိုင်သည်။
စီစဉ်ခြင်းနှင့်ကန့်သတ်: Blogging ဟာအတော်အတန်စကားပြောဆိုသင့်တယ်။ အကယ်၍ သင်သည်စာပိုဒ်တစ်ပိုဒ်ချင်းစီအတွက်နာရီနှင့်နာရီများကိုသာကုန်နေမည်ဆိုပါက၎င်းအချက်သည်ပျောက်ဆုံးနေဖွယ်ရှိသည်။ အဲဒီအစား၊ သင့် Blogging အချိန်ကိုကြိုတင်စီစဉ်ပြီးအစီအစဉ်တစ်ခုတည်းမှာမိနစ် ၆၀ ထက်မကရန်ကန့်သတ်ပါ။
လှုပ်ရှားမှုအားဖြင့်ဌာနခွဲ။ စာအရေးအသား ဘလော့ဂ်တစ်ခုနှင့်အလွန်ကွာခြားသည် တည်းဖြတ်ခြင်း ဘလော့ဂ် အလားတူစွာအတွေးအခေါ်များထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်သင်၏“ အယ်ဒီတာ့အာဘော်ပြက္ခဒိန်” ကိုဖော်ထုတ်ခြင်းပင်သင်၏ ဦး နှောက်၏ထူးခြားသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုလိုအပ်သည်။ အကယ်၍ သင်၏အဖွဲ့အစည်းသည်ကြီးမားလွန်းပါကထိုလုပ်ငန်းတစ်ခုစီကိုလူအမျိုးမျိုးအားသတ်မှတ်ပေးရန်ကြိုးစားပါ။ သင်တစ် ဦး တည်းဘလော့ဂ်ဂါဖြစ်လျှင်မိတ်ဖက်တစ် ဦး နှင့်ကုန်သွယ်ရေးတာဝန်ဝတ္တရားများကိုရှာဖွေပါ။ တစ်ယောက်ယောက်ကိုတည်းဖြတ်ဖို့အများကြီးပိုလွယ်တယ် အခြားပါပဲ ယုံကြည်စိတ်ချရသောအကြံပေးတစ် ဦး သည်ထုတ်ဝေခြင်းမပြုမီသင်၏စကားလုံးများကိုပြန်လည်သုံးသပ်လိမ့်မည်ဟုသိရခြင်းဖြင့်အလုပ်လုပ်ကိုင်ပါ။
အဆိုပါအစည်းအဝေးနှင့်အတူနိဂုံးချုပ် တစ် ဦး သတ္တိသရုပ်ပြ။ ပရိသတ်မှအကြံဥာဏ်တောင်းခံပြီးတည်းဖြတ်ရန်စေတနာ့ဝန်ထမ်းတစ် ဦး ကိုခေါ်ယူပြီးနောက်ကျွန်ုပ်တို့သည် ၅၇၅ စက္ကန့်အတွင်းဘလော့ဂ်တစ်ခုပြီးမြောက်ခဲ့သည်။ ဤသူသည်သင်တို့မငြင်းသက်သေဖြစ်ပါတယ် နိုင် သင့်မှာ system ရှိရင်မြန်မြန် blog လုပ်ပါ။ ဆလိုက်စစ်ဆေးပါ (တိုက်ရိုက်လင့်ခ်):
သင် (သို့) သင်၏ကုမ္ပဏီအတွက်ဘလော့ဂ်ရေးဆွဲခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခြင်းဆိုင်ရာအသေးစိတ်အချက်အလက်များအတွက် ထိတှေ့ ယနေ့ Slaughter ဖွံ့ဖြိုးရေး!
Tags: ဘလော့ဂ်ပိုမြန် blogging
24:2009 pm တွင်သြဂုတ်လ 11, 52
Robby ကိုကျွန်တော်ကြိုက်သည်။ “ အံ့သြစရာကောင်းတဲ့ဘလော့ဂ်တွေကပုံမှန်ပါပဲ။ ” အချို့သောရှေးရှေးများကသူတို့၏ဘလော့ဂ်များကိုစိတ်ကူးဖြစ်စေရန်သူတို့၏ဘလော့ဂ်များကိုလွဲချော်စေခြင်းဖြင့်သူတို့၏နေ့စဉ်ဘ ၀ များနှင့်အလုပ်များအားလုံး၏အပြစ်အနာအဆာများကိုလူသားများအားပြသရန်အချိန်များစွာကုန်ဆုံးကြသည်။ အမှားတွေ၊ ရှုံးနိမ့်မှုတွေအကြောင်းတောင်ကြားချင်တယ်။
24:2009 pm တွင်သြဂုတ်လ 9, 34
ငါရေးသားဖို့နက်နဲနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာဗဟုသုတလိုအပ်အချို့ပို့စ်များကိုအပေါ်တစ်ရက်, 1 သို့မဟုတ်2သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုသောနေ့ရက်ကာလယူရှိသည်ဘယ်မှာငါ့ဘလော့ဂ်ကိုသုံးပါလိမ့်မယ်။ ထိုကဲ့သို့သောအရေးအသားသည်ကျွန်ုပ်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးယုံကြည်ကိုးစားမှုကိုတည်ဆောက်ပုံ၏အရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းဖြစ်သော်လည်းကျွန်ုပ်၏အချက်ကိုသက်သေပြရန်လုံလောက်သောယာဉ်အသွားအလာမရှိပါ။ ဒါဟာအစားသင်၏အမှတ်သက်သေပြလိမ့်မယ် ...
သို့သော်စတိဗ် Pavlina ၏ဘလော့ဂ်သည်ကျွန်ုပ်၏အချက်ကိုသက်သေပြသည်။ စတိဗ်အလွန်ရှည်လျားဘလော့ဂ်ပို့စ်များကိုရေးပါ။ သူဘလော့ဂ်တင်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ဖတ်ဖူးသမျှစည်းမျဉ်းအားလုံးကိုချိုးဖောက်တယ်။ ထို့အပြင်သူသည်အသွားအလာများစွာရရှိသည်၊ မှတ်ချက်များကိုဖိုရမ်တစ်ခုသို့တိုက်ရိုက်လမ်းကြောင်းပေးရသည်။
ငါထင်တာကတော့ဘလော့ဂါကသူရေးသားတဲ့စွမ်းအားကိုတကယ်ပဲဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်တယ်ထင်တယ်။ စွမ်းအင်နိမ့်ကျသည့်“ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ” ကိုလိုက်နာပြီးစိတ်မဝင်စားသောဘလော့ဂ်ပို့စ်များသည်ကျွန်ုပ်အားရှုံးနိမ့်မှုအတွက်စာရွက်ပုံရသည်။ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကိုစွမ်းအင်မြင့်မားစွာချိုးဖောက်လျှင်တန်ဖိုးမြင့်မားသောပါဝင်မှုသည်အောင်မြင်လိမ့်မည်။